Forza Horizon 5 inogona kuridzwa paLinux? | Linux Addicts
Isaac | 14/11/2021 11:17 | Linux Mitambo, chiutsi
Forza Horizon 5 ndeimwe yemazita ekupedzisira akabuda kune vanoda kutyaira simulation. Mutambo wevhidhiyo une gameplay inoshamisa zvechokwadi uye yemhando-ye-iyo-mifananidzo mifananidzo. Nekudaro, haisi kuwanikwa yeLinux. Kusvika parizvino, mutambo wevhidhiyo uyu haugone kutambwa, sezvaive zvakaita Age Of Empires 4, nemamwe akawanda kune mamwe mapuratifomu.
Pane kudaro, iwe unogona ikozvino kutamba Forza Horizon 5 pakugovera kwako Linux, kuyedza zvavanga vachiita kubva kuMitambo Yekutamba uye Xbox Game Studios. Uye zvese, zvakare, nekuda kweValve uye yayo Proton chirongwa. Ichi chinobva kune WINE inoenderana layer nekuvandudzwa kweyakazvarwa Steam vhidhiyo mitambo yeWindows, yasvika kune imwe vhezheni (exp) yakaburitswa munaNovember 11.
Inofanira kushanda nemazvo pazvose zviri zviviri AMD neNVIDIA GPU, kunyangwe ichiri mukuyedza, saka zvimwe zvinhu zvinoramba zvakakwenenzverwa, senge vatambi vakawanda, izvo zvisingashande zvakanaka izvozvi. Nekudaro, iwe unogona kutoedza uye kunakidzwa nazvo, uye vagadziri ve Valve uye CodeWeavers vanoshanda kuProton havasi kuzomira ipapo. Kuvandudzwa kuchauya kuitira kuti Forza Horizon 5 inogona kuridzwa pamwe chete nepapuratifomu yayo.
Kuti ugone kuzviedza ikozvino, unogona kutevera izvi saka nyore matanho uye nekutsanya, pasina chikonzero chemirairo kana chero chinhu chakadaro:
Zvadaro mune yako Steam mutengi pane yako Linux distro.
Tsvaga iyo Yekuyedza Proton uye uiise kana usati watoita.
Kurudyi tinya pamutambo uye enda kuZvivakwa.
Sarudza iyo Kuenderana menyu kudivi rekurudyi.
Tarisa kuti iyo sarudzo "Kumanikidza kushandiswa kweiyo chaiyo Steam Play inoenderana chishandiso" inotariswa.
Pakupedzisira, mubhokisi rekudonha-pasi rinoonekwa, sarudza Proton Kuedza.
Iwe unogona ikozvino kutamba Forza Horizon 5, yakambotengwa paSteam.
Forza Horizon 5 - Dhaunirodha paSteam
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Forza Horizon 5 inogona kuridzwa paLinux?
Ichange iri yemitambo yemotokari ...
Dynamic rendering yeVulkan graphics API